Iindaba -Intsimi yetekhnoloji engundoqo ishiyeka kancinci ngasemva, ukunyuka kweshishini lempompo lelizwe lam kunendlela ende ekusafuneka ihanjiwe
Ngexesha elithile, ukuphuhliswa kweshishini lokumpompa kwelizwe lam bekuqhubeka ngokuxhumaxhuma kunye nemida. Iqhutywa yimigaqo-nkqubo elungileyo yokuvelisa yelizwe, omabini amanqanaba emizi-mveliso kunye nemigangatho yezobugcisa iphuculwe kakhulu ngokwaziswa kweendlela ezininzi ezinje ngokufunxa, ukuhlaziya notshintsho, kunye nokwetyisa kunye nokwenza izinto ezintsha. Ngokukodwa, inqanaba leemveliso ezixhasayo zobuchwepheshe obuphambili bempompo kunye nezixhobo lifikelele kwinqanaba elikhokelayo kwilizwe liphela.
Kuyaqondakala ukuba phantsi kolawulo lweemfuno zentengiso, iimveliso zempompo ephezulu kwilizwe lam ezinjengeempompo zoxinzelelo olukhulu olunamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda zenze amandla axhasayo aneleyo nawaneleyo kumacandelo ombane, isinyithi, ipetrokhemikhali, kunye nokhuselo lokusingqongileyo. Kwaye ngohlengahlengiso lolwakhiwo lwecala lokubonelela kunye nokuphuculwa kwenqanaba lobuchwephesha, amandla apheleleyo eshishini lempompo lelizwe lam ulinciphisile kakhulu isithuba kunye namazwe ahambele phambili.
Emva kokungena "kwisiCwangciso se-13 seminyaka emihlanu", ukuphunyezwa kwamaziko amakhulu obunjineli kukhawulezile, kunye nolondolozo lwamandla kunye nokunciphisa ukungcola kwiindawo eziphambili kuye kwaba yinto ekugxilwe kuyo emsebenzini. Idabi lokhuselo esibhakabhakeni esiluhlaza, ukuthintela ungcoliseko lwamanzi kunye nolawulo, kunye nolawulo lwentsimbi enzima sele iqhubele phambili kubunzulu, kwaye inkqubo yothintelo longcoliseko kunye nolawulo ikhuthazwe ngamandla. Ukubaluleka kweshishini lokumpompa kuyazibonakalisa.
Idatha ibonisa ukuba ubungakanani beemarike zeshishini lokumpompa kwilizwe lam kwi-2017 zazimalunga ne-170 yezigidigidi. Iinkcukacha-manani ezingaphelelanga zibonisa ukuba ziphantse zibe ngama-7 000 iinkampani zempompo kwilizwe liphela nangaphezulu kwamashishini ayi-1 000 ngaphezulu kwesayizi emiselweyo. Ngokuvundiswa okuhle kwemigaqo-nkqubo yesizwe neyasekhaya, ikamva lamashishini akuchukumisi.
Inkqubela phambili ekhawulezileyo, ingqalelo eyaziwayo kwihlabathi liphela, impumelelo ebalaseleyo… La magama endumiso asetyenziswa ngokufanelekileyo kushishino lwempompo kwilizwe lethu, kodwa emva kweentyatyambo ezidubulayo, kukwakho neengxaki ezingenakuhoywa.
Okokuqala, inani lee-SME likhulu kakhulu. Kwinkqubo yophuhliso olukhawulezayo lweshishini lempompo, iinkampani ezincinci kunye neziphakathi ezikhulu kunye neepompo zabucala ziye zavela ngokulandelelana, kwaye zihlala kwinani elipheleleyo leenkampani zempompo. Kukho ukunqongophala kweenkampani ezinkulu, kwaye uphawu kunye neempawu zeenkampani ezincinci azomelelanga, ezingalunganga kuphuhliso lulonke lweshishini lempompo.
Okwesibini, uxinzelelo lweemarike luphantsi. Ngokucothiswa kwemfuno yentengiso kunye nonikezelo olwaneleyo, ishishini lempompo lelizwe lam liyaqhubeka nokukhula, kodwa umthamo wentengiso we-100 yezigidi zeerandi ukulungele ukuya. Xa kuthelekiswa nobukhulu bemakethi enkulu, uxinzelelo lweemakethi luphantsi, kwaye ukuthengiswa konyaka kweshishini elikhulu kungaphantsi kwe-10 yezigidigidi okanye kungaphantsi kwe-5 yezigidigidi. Ke ngoko, kukho isidingo esingxamisekileyo sokwandisa uxinzelelo lweemarike.
Okwesithathu, ngokuhambelana nezikhokelo zesicwangciso-qhinga selizwe "zokwazisa, ukwetyisa, ukufunxa, kunye nokuyila", ishishini lempompo lelizwe lam ngenene lixhamle kancinci. Nangona kunjalo, kwimisebenzi yokwenyani, iinkampani ezininzi zithande ukwazisa Kukho nokuba zimbalwa, ezenza ukuba ukuphuhliswa kweshishini lempompo lelizwe lam liwele kwisangqa esingaqhelekanga. Akukho buchwephesha buninzi kwaye buncinci obunamalungelo obunini obunini bokushicilela.
Ngokubanzi, nangona uninzi lweendidi zemveliso kwishishini lempompo lelizwe lam zifezekisile imveliso ezizimeleyo kunye nemveliso, zimbalwa iindidi zeemveliso ezinamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kwaye ubuchwepheshe obuphambili ngakumbi busezandleni zamazwe aphuhlileyo, ukuze iinkampani zempompo yelizwe lam. bakwindawo ephantsi. Ngapha koko, ngenxa yokusilela kuphando lwetekhnoloji esisiseko, uphuhliso loomatshini esisiseko kunye nezinto ezisisiseko kwishishini lempompo lelizwe lam lisemva, eliye laba ngumqobo ophambili kuphuhliso lweshishini, kwaye lijongene nomngcipheko wokuphelisa. amandla emveliso lixesha. Ke ngoko, ukunyuka kweshishini lempompo kunendlela ende ekufuneka ihanjisiwe. .